Finfinnee Kutaa Bulchiinsa Booleetti Galmi Amantii Waaqeffannaa Malkaa Goosuu baname. – Kichuu
Finfinnee Boolee: Finfinnee Kutaa Bulchiinsa Booleetti Galmi Amantii Waaqeffannaa Malkaa Goosuu baname.
Akkasumas Seensa Finfinnee ta’ee gidduu Magaalaa Barraki fi Sulultaa bulchiinsa magaalaa Sulultaa jalatti Ganda Akaakoo Mana Abbichuuttis Galmi Amantii Waaqeffannaa Tulluu Dhaamotaa jedhamus Galmoota baatii Sadaasaa banaman keessaa tokkoodha.
Dhaabbanni Hordoftoota Amantii Waaqeffannaa erga hundaa’ee Giddu galoota shaniin hojii babal’ina Galmoota Amantii Waaqeffannaa kan itti fufe yoo ta’u; Finfinneettis Galmoota:-
1. Galma Amantii Waaqeffannaa Hora Finfinnee
2. Galma Amantii Waaqeffannaa Tulluu Ejersa Finfinnee
3. Galma Amantii Waaqeffannaa Caffee Tumaa fi
4. Galma Amantii Waaqeffannaa Malkaa Goosuu banee Amantii Waaqeffannaa barsiisaafi babal’isaa jira.
Finfinneen lafa yookan Wiirtuu Amantii, diinagdeefi kkf taatee; magaala Oromummaan, afaan, aadaan, eenyummaan, Waaqeffannaan, duudhaani fi seenaan Warra Gadaa irraa dhiibamee fi ammallee magaala Waaqeffannaa itti babal’isuuf Waaqeffattootni lafa tajaajila Galma Waaqeffannaa bulchiinsa magaalitti irraa argachuu kandadhabee fi hawaasa magaalittii iraayis kiraa manas argachuuf lafa Waaqeffattoonni hedduu itti rakkataanidha.
Ta’us haaluma kana keessatti Galmootni 4 Finfinneetti banamanii Galmootni hedduun ammoo GAON Finfinnee tti banamani tajaajila Waaqeffannaa kennaa jiru.
Kanaaf jaalattoonni fi deeggartoonni Amantii Waaqeffannaas aadaafi duudhaa teenya deebisnee ijaaruuf hawaasni Oromoo Finfinnee jirtan Waaqeffattoota tumsaa dhaammachaa jajjabinanis akka itti fufamu isin hubachiisaa;
Gadaan mirga jenna!
Qabsoon Oromoo waa hedduu irraa aguuggii kaasaa jira. Amaaraa kanaan dura bullukkoo Itoophiyaa jala dhokatan irraa aguuggii guddaa kaase. Har’a warri Amaaraa otuu hin jaalatiin dirqamanii ofitti deebi’aa jiru. Saboonni hedduus eenyummaa isaanii dhugaatiin mul’achaa jiru. Kun hedduu nu boonsa; daran jabaatee itti fufa.
Sabni kamiyyuu cunqursaaf hin tolu!
Oromoon maaliif wareegama guddaa baasaa jira?
Oromoon nagaa jaalata; Oromoon bilisummaa jaalata. Garuu, Oromoon waan guddisee jaalatu kana humnaan sarbame. waan jaalatan kana immoo dhabanii taa’uu hin dandeenye. Waan jaalatan kana deebisanii argachuuf qabsoo gaggeessuu fi wareegama baasuun dirqama ta’e. Kanaaf, Oromoon nagaa fi bilisummaa argachuuf wareegama ulfaataa baasaa jira. Nagaan Oromoo ni deebi’a; bilisummaan Oromoon ni mirkanaa’a!
#Nagaa #Bilisummaa #Oromoo #Oromiyaa
ABO ta’uun rakkoo Oromoo ofitti fudhachuu dha; bilisummaa saba Oromoof wareegama baasuu dha; Oromoon aangomee bilisummaa isaatif akka qophaa’uf ofkennanii qabsaa’uu dha.
ABOn Kabajaa dha!
The mission of Oromo freedom struggle is to decolonise Oromia that aims to reverse the legacy of inequality in Ethiopia.
ABOn kan qabsaa’u mootummaa ummata sodaatu ijaaruuf; warri ummata mootummaa sodaatu ijaaruuf yaalan akeeka kana hin jaalatan. Kanaaf, halkanii guyyaa ABO balaaleffatu.
ABOn garuu kaayyoo ifaa fi laliilawaa waan qabuuf hojii akeekkate irraa hin maqu. Ummata Oromoo aangessuun itti fufa; mootummaa ummata sodaatu hundeessuuf qabsoon godhamus daqiiqaa tokkoof illee hin dhaabbatu.
Nagaa fi Bilisummaa saboota hundaaf!!